शिक्षकको कुटाईबाट घाईते विद्यार्थीको मृत्यु
Sat, Nov 16, 2019 at 1:20am
बुधबार, २५ आषाढ २०७६,	आहाखबर	4.15K
काठमाठौँ, २५ असार ।
विद्यार्थीको मृत्युपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले चार जना शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसार प्रिन्सिपल यशोदा जोशी, शिक्षकत्रय दुर्गादत्त पाठक, लक्ष्मण भट्ट र हर्क जाग्रीलाई घटनाबारे सोधपुछका लागि ल्याएको हो । विद्यालय बाहिर साथीभाईसंग झैझगडाको विषयलाई लिएर विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक सहितका शिक्षकले कुटपिट गरेको छात्रको परिवारले बताएका थिए ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत कलौनीलाई १३ असार (शुक्रबार) विद्यालयमै कुटपिट गरेको उनका बाबु बृरस्पती कलौनीले बताए। मृतक कलौनीका बाबुले प्रअ यशोदा जोशी, शिक्षत्रय लक्ष्मण दत्त भट्ट, हर्क जाग्री र दुर्गादत्त पाठकले कुटपिट गरेर घाईते बनाएको यस अघि नै आरोप लगाएका थिए । कुटपिटबाट कलौनीको टाउको, छातीमा चोट र दायाँखुट्टा भाँचिएको थियो ।
माधवले विद्यालयका अन्य साथीभाईसंग पनि कुटपिट गर्ने झै–झगडा गर्ने र खुकुरी समेत प्रहार गर्ने जस्ता कृयाकलाप गरेकाले उनलाई विद्यालयले निकाला गरिदिएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।
विद्यालयलले माधवलाई बाबुको जिम्मा लगाउदै उनको (टिसी) ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट र (सिसी) क्यारेक्टरसटिफिकेट समेत दिएर विद्यालयबाट विदाई गरिदिएका थिए । परिवारले उनलाई डडेल्धुराको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गराए । त्यहाँ उनको खुट्टामा प्लास्टर गरेर थप उपचारका लागि रिफर ग-यो, बुधबार महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याएका थिए, त्यहाँ पनि उनको उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि कलौनीलाई रिफर गरेपछि परिवारले उनलाई नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल हुँदै भारतीय राममूर्ती अस्पतालमा उपचार गराईराखेका थिए । उपचारकै क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्त आक्रोशित भएका छन् ।
एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण, नयाँ शुल्क तोकियो !
अब शिक्षक बन्न विषयगत परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने
‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का लागि दुई अर्ब ७१ करोड अनुदान स्वीकार
गाउँकै स्थानीय कलेजमा विद्यार्थीको मोह
निजी मेडिकल कलेजको वृद्धि शुल्क फिर्ता गर्नुहोस् : शिक्षामन्त्री पोखरेल
जुम्लामा एमडिजीपी शैक्षिक कार्यक्रम रोकियो
मेडिकल कलेजका मालिकको धम्की- शिक्षामन्त्रीलाई कुर्सीबाट निकाल्छाैं
तलब वृद्धिको माग गर्दै कञ्चनपुरका बाल विकासमा कार्यरत शिक्षिका आन्दोलित
सरकार र मेडिकल कलेजबीच अनौठो जुहारी
डेढ अर्ब बढ्याे मेडिकल कलेजहरूकाे नाफा
विद्यार्थीको भर्ना रोकेर मेडिकल कलेज संचालकहरुले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई साँचो
कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशित, कसको कति जिपिए ?
कक्षा ११ काे नतिजा भाेलि सार्वजनिक हुँदै